Jawharadii Lama Dagaanka Ku Lutay!! Halkuu Ku Danbeeyay Halkii Xidig Ee Uu Cristiano Ronaldo Sheegay In Uu Isaga Ka Fiicnaa? - Gool24.Net
May 27, 2020 Mahamoud Batalaale
Cristiano Ronaldo waxa uu hore u sheegay in uu iska aaminsan yahay in uu yahay ciyaartoygii abid ugu fiicnaa wuxuuna mar uu qiimayn isku sameeyay ku dooday in aanu arag ciyaartoy kale oo samayn kara waxa uu kubbada cagta ka soo sameeyay.
Laakiin waxaa jiray hal ciyaartoy oo uu Cristiano Ronaldo qirtay in uu isaga ka fiicnaa wuxuuna ahaa Fabio Paim, balse halkuu xidigani ku danbeeyay?
Waraysi uu Cristiano Ronaldo hore u siiyay majalada France Football ayuu ku sheegay in uu yahay xidigii abid ugu fiicnaa kubbada cagta wuxuuna ahaa waraysi dood badan keenay.
Ka hor inta aynaan aynaan gaadhin xidiga Fabio Paim ee uu Ronaldo sheegay in uu ka fiicnaa aan marka hore soo qaadano hadlakii uu Ronaldo iskugu magacaabay xidiga aduunka ugu fiican.
Ronaldo ayaa France Football u sheegay: “Anigu waxaan ahay ciyaartoyga ugu fiican taariikhda ee waqtiyada xun iyo waqtiyada fiican labadoodaba. Waxaan ixtiraamaya qof walba cida uu muhiimada siinayo, laakiin anigu waligay maan arag cid aniga iga fiican”.
“Anigu markastaba taas ayaan u malaynayay. Ma jiro ciyaartoy samayn kara waxa aan samayn karo. Ma jiro ciyaartoy aniga iga dhamaystirani” ayuu markaas Ronaldo hadalkiisa raaciyay.
Amaantii Ronaldo ee naftiisu intaas kumay koobnayn wuxuuna hadalkiisa raaciyay: “Waxaan si fiican ugu ciyaaraa labadayda lugood, waan deg deg badanahay, awood badanahay, madaxa ayaan ku fiicanahay, goolal ayaan dhaliyaa waxaanan sameeyaa gool caawino. Waxaa jira dad door bida Neymar ama Messi, laakiin waan idiin sheegayaa ma jiro qof aniga iga dhamaystirani”.
Laakiin waa kuma xidigii uu Ronaldo qirtay in uu isaga ka fiicnaa ee Fabio Paim?
Sanadkii 2003 ayay ahayd markii uu Ronaldo qirtay in Fabio Paim uu ahaa xidiga isaga ka fiicnaa markaas oo uu ka soo wareegay kooxda Sporting Lisbon oo uu Man United soo gaadhay.
Cristiano Ronaldo oo ka hadlayay Fabio Paim ayaa yidhi: “Haddii aad u malaynayso in aan anigu fiicanahay, kaliya sug ilaa inta aad arkayso Fabio Paim”.
Amaantii uu markaas Ronaldo ka bixiyay Fabio Paim waxay keentay inuu maamulka United ku yimid shaki ay in ay kooxda Sporting kala soo saxiixdeen xidigii qaldanaa oo ay ahayd in ay la soo wareegaan Fabio Paim oo isla kooxda Sporting kala tirsanaa Ronaldo.
Haddii uu Ronaldo soo hogaamiyay Man United, Real Madrid iyo Juventus, waayaha ciyaareed ee Fabio Paim ayaan ka duwanaadeen laakiin dariiqa uu kubbada cagta ka maray ayaa ka duwanaaday halka uu Ronaldo maray.
Sanadkii 2008 kii waxa uu Fabio Paim ku biiray kooxdii Chelsea ee uu hogaaminayay Luiz Felipe Scolari waxa uu dhawr jeer muujiyay awoodii ciyaareed ee uu Ronaldo ku qiray balse marnaba muu helin fursadii uu Blues uga baahnaa waxaana kadib muddo uu kaydka fadhiyay lagu bixiyay heshiis amaah afar bilood ahaa.
Fabio Paim ayaa amaah aan guulaysan ku soo qaatay kooxaha Rio Ave iyo Real Massama intii aan laga sii dayn kooxda Sporting sanadkii 2010 kii isaga oo aan xataa kulan muhiim ah oo horyaalka ciyaarin.
Xidigii Ronaldo qirtay in uu isaga ka fiicnaa ee Fabio Paim ayaa ku biiray kooxda heerka saddexaad ee horyaalka Portugal ee S.C.U. Torreense wuxuuna u ciyaaray saddex kulan oo kaliya intii aanu iskaga bixin.
Siddeedii sanadood ee ku xigtay waxa uu Fabio Paim isku maray todoba wadan oo uu ka ciyaaray waxayna kala yihiin China, Angola, Malta, Lithuania, Luxembourg, Qatar iyo Brazil waxaana u dheer horyaaladii Yurub ee uu ka soo bilaabay waayihiisa ciyaareed.
Sanadkii 2015 kii waxa uu Fabio Paim ku biiray kooxda rer Luxembourg ee Karyl-Tetange oo heerka labaad ka ciyaarta laakiin dhawr bilood kadib waa la caydhiyay kadib markii uu sameeyay dhaqamo aan looga baran ciyaartoyda xirfadlayaasha ah.
Sanadkii la soo dhaafay ee 2019 kii waxa uu Fabio Paim galay xabsi kadib markii looga shakiyay in uu kootarabaaninayay daroogo waxaana qaabkii ugu xumaa ku dhamaaday waayihii ciyaareed ee uu Ronaldo ku sheegay in uu isaga ka fiicnaa.
Waxay markaas booliisku ka warbixiyeen in Fabio Paim lagu qabtay 12 garaam oo xashiishad ah oo qiimaheedu dhamaa 900 Euros tan iyo markaasna kubbad danbe muu ciyaarin.
Laakiin Fabio Paim ayaa markii uu Chelsea ka tirsanaa waxa hadalkiisii ka mid ahaa: “Waxaan inta badan la tababartaa kooxdakowaad laakiin ma ciyaaro. Waxaan doonayay in ciyaaro, waxaan dareemayay in aan wax badan qaban kari lahaa. Jorge Mendes ayaa Chelsea igeeyay, lacag fiican ayaan helayay kooxda ayuuna ciyaartoy ku lahaa taas oo cid walba u fiicnayd”.
Fabio Paim oo ka calaacalay fursadii uu Chelsea ku lumiyay ayaa yidhi: “Haddii ay maanta ahaan lahayd samir badan ayaan yeelan lahaa, laakiin waqtigaas waqti badan ee xorta ah ee aan haysta ayaan doqoniimo badan ku haystay waxyaaba aan sameeyay”.
Inkasta oo uu Ronaldo qirtay in Fabio Paim uu ahaa xidiga isaga ka fiican, haddana muu helin maskaxdii iyo shaqadii uu ku gaadhi lahaa heerkii uu Ronaldo u arkayay wuxuuna noqday jawharad lama degaan ku lugtay.